अय्यूबको विषयमा (भाग दुई) | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अय्यूबका वास्तविक अनुभवहरू र तिनको सोझोपन र इमानदार मानवताको अर्थ के हो भने, तिनले आफ्नो सम्पत्ति र आफ्ना छोराछोरीहरू गुमाउँदा सबैभन्दा तर्कसंगत विचार र निर्णय गरे। त्यस्ता तर्कसंगत निर्णयहरू तिनको दैनिक काम कुरा र तिनले आफ्नो दैनिक जीवनको समयमा जानेका परमेश्‍वरका कार्यहरूबाट अलग गर्नै नसकिने थियो। अय्यूबको इमानदारिताले तिनलाई सबै थोकमाथि परमप्रभुको हात छ भनी विश्‍वास गर्न सक्षम बनायो। तिनको विश्‍वासले तिनलाई सबै कुरामाथि यहोवा परमेश्‍वरको सार्वभौमिकता छ भन्‍ने तथ्यबारे थाहा गरायो; तिनको ज्ञानले तिनलाई यहोवा परमेश्‍वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरू पालन गर्न इच्छुक र सक्षम बनायो; तिनको आज्ञाकारिताले तिनलाई यहोवा परमेश्‍वरसित डराउन समर्थ तुल्यायो; तिनको डरले खराबीबाट बस्‍ने तिनको कार्यलाई झन्-झन् वास्तविक बनायो; अन्ततः अय्यूब सिद्ध भए किनकि तिनी परमेश्‍वरसँग डराउँथे र खराबीबाट अलग बस्थे; तिनको सिद्धताले तिनलाई ज्ञानी बनायो र तिनलाई अत्यन्त तर्कसंगत बनायो।
हामीले यो “तर्कसंगत” भन्‍ने शब्दलाई कसरी बुझ्नुपर्छ? यसको शाब्दिक अर्थ राम्रो चेतनामा हुनु, आफ्नो सोचविचारमा तर्कसंगत र समझदार हुनु, बोलीवचन, व्यवहार र विचारमा सत्य हुनु, र सही अनि स्थिर नैतिक मापदण्ड धारण गर्नु भन्‍ने हुन्छ। तापनि अय्यूबको तर्कलाई यति सजिलै वर्णन गर्न सकिँदैन। जब यहाँ अय्यूबमा धेरै तर्कसंगत क्षमता थियो भनिएको छ, यो तिनको मानवता र परमेश्‍वरको सामु तिनको आफ्नो आचरणको सम्बन्धमा भनिएको हो। अय्यूब इमानदार भएको हुनाले, तिनी विश्‍वास गर्न र परमेश्‍वरको सार्वभौमिकताको पालना गर्न सक्षम थिए, जसले तिनलाई यस्तो ज्ञान दियो जुन अरूले प्राप्त गर्न सक्दैनथियो, र यस ज्ञानले तिनलाई आफूमाथि आइलाग्ने कुराहरू अझ राम्ररी बुझ्न, विचार गर्न, र परिभाषित गर्न सक्षम तुल्यायो, जसले तिनलाई के गर्नुपर्छ र कुन कुरा पक्रिनुपर्छ भनी सही र स्पष्ट रूपमा बुझ्न सहायता गऱ्यो। भन्नुको अर्थ, तिनका शब्दहरू, व्यवहार, तिनका कार्यहरूका पछाडिका सिद्धान्तहरू, र उनको व्यवहारका आचार-संहिता नियमित, स्पष्ट, र निश्‍चित थिए, र अन्धो, आवेगपूर्ण वा भावनात्मक थिएनन्। तिनीमाथि जे आइपरे पनि त्यसप्रति कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ सो तिनलाई थाहा थियो, जटिल घटनाहरू बीचको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भनी तिनले जान्दथे, र समात्नुपर्ने बाटोलाई कसरी समात्नुपर्छ भन्‍ने तिनलाई थाहा थियो, यसबाहेक यहोवा परमेश्‍वरले दिनुहुँदा र लिनुहुँदा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनी तिनले जान्दथे। अय्यूबको तर्कशील क्षमता यही नै थियो। अय्यूब यस्तै तर्क क्षमताले सुसज्जित भएको कारण, तिनले आफ्‍नो सम्पत्ति र आफ्‍ना छोराछोरी गुमाउँदा पनि उनले यसो भने, “यहोवाले दिनुभयो र यहोवाले नै लानुभएको छ; यहोवाको नाउँको प्रशंसा होस्।”
जब अय्यूबले शरीरको ठूलो पीडा भोग्नुपऱ्यो, र तिनका आफन्त र साथीहरूको विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो र जब तिनले मृत्युको सामना गर्नुपर्‍यो, तिनको वास्तविक आचरणले फेरि एकपल्ट सबैलाई तिनको वास्तविक अनुहार देखायो।
अय्यूबको वास्तविक अनुहार: सत्य, शुद्ध, र झूट रहित
हामी अय्यूब २:७-८ लाई पढौं: “यसैले शैतान यहोवाको उपस्थितिबाट गयो र अय्यूबलाई खुट्टाको पैतालादेखि टाउकोसम्मै पोल्‍ने खटिराहरू उब्जाइदियो। अनि तिनले आफूलाई कन्याउन भाँडाको एउटा टुक्रा लिए; अनि तिनी खरानीमा बसे।” यो अय्यूबको शरीरमा पीडादायक खटिराहरू निस्केको बेला तिनको आचरण कस्तो थियो त्यसको व्याख्या हो। यस समयमा, पीडाले कष्ट भोग्‍ने क्रममा अय्यूब खरानीमा बसे। कसैले पनि तिनको उपचार गरेनन्, र कसैलाई पनि तिनको शरीरको पीडा कम गर्न मद्दत गरेनन्; यसको सट्टामा, तिनले खटिरा कन्याउन फुटेका माटोका भाँडाका टुक्राहरू प्रयोग गरे। सतही रूपमा, यो केवल अय्यूबको यातनाको एक चरण मात्र थियो, र तिनको मानवता र परमेश्‍वरप्रतिको भयसँग यसको कुनै सम्बन्ध थिएन, किनकि अय्यूबले यस बेला आफ्नो मनस्थिति र विचार व्यक्त गर्न कुनै शब्द बोलेनन्। तापनि, अय्यूबका व्यवहार र तिनको आचरण अझै पनि तिनको मानवताको वास्तविक अभिव्यक्ति हुन्। अघिल्लो अध्यायको विवरणमा हामीले पूर्वीय संसारमा अय्यूब सबैभन्दा महान् व्यक्ति थिए भनेर पढ्यौं। यसको साथै दोस्रो अध्यायको यो खण्डले पूर्वका यस महान् व्यक्तिले खरानीमा बसेर फुटेका माटोका भाँडाका टुक्राहरू प्रयोग गरे भन्‍ने देखाउँछ। के यी दुई वर्णन बीच स्पष्ट भिन्नता छैन र? यो एउटा भिन्‍न हो जसले हामीलाई अय्यूबको वास्तविक जीवन देखाउँदछ: आफ्नो प्रतिष्ठित स्थान र हैसियतको बाबजुद पनि, तिनले यी कुराहरूलाई कहिल्यै प्रेम गरेनन् न त यी थोकहरूमा कुनै ध्यान नै दिए; अरूले तिनको अडानलाई कसरी हेर्छन् भनेर तिनले वास्ता गरेनन्, न त तिनको काम वा आचरणले तिनको अडानमा कुनै नकारात्मक असर पार्ला कि भनेर नै तिनी चिन्तित थिए; तिनी प्रतिष्ठाका आशिषहरूमा लिप्त भएनन्, न त तिनले प्रतिष्ठा र स्थितिको साथमा आउने महिमाको आनन्द लिए। तिनले केवल आफ्नो मूल्य र यहोवा परमेश्‍वरको नजरमा आफ्नो जीवनको महत्त्वको बारेमा मात्रै चिन्ता गरे। अय्यूबको साँचो आत्मा नै तिनको सार थियो: तिनी प्रसिद्धि र सम्पत्तिलाई प्रेम गरेनन्, र तिनी प्रसिद्धि र सम्पत्तिका लागि जिएनन्; तिनी सत्य, र शुद्ध, अनि झूट रहित थिए।
अय्यूबको दयालु हृदय र इमानदारीता
अय्यूबको आचरणबाट हामी तिनको मानवताका विभिन्न पक्षहरूको अभिव्यक्ति देख्न सक्छौं, त्यसकारण अय्यूबले आफू जन्मेको दिनलाई सराप्न तिनको मुख खोल्दा हामी तिनको कुन मानवता देख्छौं? तल हामी यही विषयमा बताउनेछौं।
माथि, मैले अय्यूबले आफू जन्मेको दिनलाई सराप्नुको कारणको बारे कुरा गरेको छु। तिमीहरू यसमा के देख्छौ? यदि अय्यूब कठोर हृदयको र प्रेमरहित थिए भने, यदि तिनी उदासीन र भावनाहीन र मानवताबाट अलग थिए भने, के तिनले परमेश्‍वरको हृदयको चाहनाको वास्ता गर्नेथिए होला? तिनले परमेश्‍वरको हृदयको चाहनालाई वास्ता गर्थे भने, के तिनले आफू जन्मेको दिनलाई तुच्छ ठान्‍न सक्थे? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यदि अय्यूब कठोर हृदयको र मानवताबाट अलग भएको भए, के तिनी परमेश्‍वरको पीडाले व्याकुल हुनसक्थे? परमेश्‍वर तिनीद्वारा शोकित हुनुभएको कारण के तिनले आफ्नो जन्म दिनलाई सराप्न सक्थे? यसको उत्तर हो, बिलकुल होइन! अय्यूब दयालु थिए, यसैले तिनले परमेश्‍वरको हृदयको वास्ता गरे; अय्यूबले परमेश्‍वरको हृदयको वास्ता राखेकाले नै तिनले परमेश्‍वरको पीडा महसुस गरे; तिनी दयालु थिए यसैले तिनले परमेश्‍वरको कष्टको अनुभव गरेर, ठूलो यातना सहे; तिनले परमेश्‍वरको पीडा महसुस गरेकाले नै तिनले आफू जन्मेको दिनलाई घृणा गर्न थाले, यसरी तिनले आफ्नो जन्म दिनलाई सरापे। बाहिरका मानिसहरूका निम्ति, अय्यूबको परीक्षाको अवधिमा तिनको सम्पूर्ण आचरण उदाहरणीय छ। केवल तिनले आफू जन्मेको दिनलाई सरापेका कुराले मात्र तिनको सिद्धता र सोझोपनमाथि प्रश्‍न चिन्‍ह खडा गर्छ, वा एउटा फरक मूल्याङ्कन प्रदान गर्दछ। वास्तवमा यो अय्यूबको मानवताको सारको सबैभन्दा वास्तविक अभिव्यक्ति थियो। तिनको मानवताको सार लुकाइएको थिएन वा पोको पारिएको थिएन, वा अरू कसैद्वारा संशोधित गरिएको थिएन। जब तिनले आफू जन्मेको दिनलाई सरापे, तब तिनले आफ्नो हृदयको गहिराइमा भएको दया र इमानदारीता देखाए; तिनी एउटा झरनाजस्तै थिए, जसको पानी यति स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ कि त्यसको भुइँ पनि देखिन्छ।
अय्यूबको बारेमा यी सबै सिकिसकेपछि, धेरैजसो मानिसहरूमा अवश्य नै अय्यूबको मानवताको सारको सही र उद्देश्य परक मूल्याङ्कन हुनेछ। उनीहरूमा परमेश्‍वरले भन्नुभएको अय्यूबको सिद्धता र सोझोपनको बारेमा गहन, व्यावहारिक र अझ उच्च बुझाइ र कदर हुनुपर्दछ। आशा छ, यो बुझाइ र कदरले मानिसहरूलाई परमेश्‍वरको भय मान्ने र खराबीबाट टाढा बस्ने बाटोमा हिँड्न थाल्न सहायता गर्नेछ।
अघिल्लो: अय्यूबको विषयमा (भाग एक)
अर्को: परमेश्‍वरले अय्यूबलाई शैतानको हातमा सुम्पनु र परमेश्‍वरको काम बीचको सम्बन्ध